Trano fiarakodia tsy mendrika vola any Zurich Taxi any amin'ny seranan'i Zurich
Fandefasana ny serivisy any Zurich, mora vidy sy mahaliana.
Ny famindrana taxi tsy miankina anao mankany amin'ny seranam-piaramanidin'i Zurich
Ny seranam-piaramanidin'ny Transfer Zurich by TSB dia manome ny mpanjifa ny mety hisian'ny vidiny ambany Airport Zurich to come. Afaka misimisy ihany ny mpamily sy ny mpanampy amin'ny fiara madio. Ho an'ny olona 7 isaky ny famindrana.
Airport Transfer Zurich - Birao izao ary manontania amin'ny mpamily
Tsy voatery mandoa mialoha ny famindrana ny seranam-piaramanidina Zurich. Afaka mandidy amin'ny alàlan'ny finday ianao na amin'ny alàlan'ny mailaka ary mandoa mivantana amin'ny mpamily any amin'ny taxi aorian'ny fiara.
Ahoana no handoavana ny famindrana fiaramanidina ao Zurich?
Mandray vola amin'ny Frantsa sy Euro izahay. Ny carte de crédit rehetra tahaka ny Visa, AMEX na Mastercard. Amin'ny fangatahana, azonao atao ihany koa ny mandoa vola amin'ny fiarandalamby Zurich amin'ny alàlan'ny carte de crédit.